बङ्लादेशी विमान दुर्घटनामा परेका पीडितका परिवारले ठूलो क्षतिपूर्ति पाउने अवसर गुमाए - sandeshpost
बिहिबार, मंसिर २७, २०७५
news & intertainment
Home > समाचार > बङ्लादेशी विमान दुर्घटनामा परेका पीडितका परिवारले ठूलो क्षतिपूर्ति पाउने अवसर गुमाए
बङ्लादेशी विमान दुर्घटनामा परेका पीडितका परिवारले ठूलो क्षतिपूर्ति पाउने अवसर गुमाए
March 18, 2018 admin59
काठमाडौं–अघिल्लो सोमबार त्रिभुवन विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त बङ्लादेशी विमानमा परेका पीडितका परिवारले ठूलो क्षतिपूर्ति रकम पाउने अवसर गुमेको छ ।
नेपाल र बङ्लादेशले विमान दुर्घटनामा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनेसम्बन्धी ‘मोन्ट्रियल अभिसन्धि १९९९’ लागू गर्न गरेको ढिलाइले यो अवस्था निम्तिएको हो ।
यो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा विमान दुर्घटनाका पीडितहरूले प्रतियात्रु १,४५,४६२ अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । यो लगभग १ करोड ५१ लाख रुपियाँ हुन आउँछ ।
मोन्ट्रियल अभिसन्धिको धारा २१ ले विमान दुर्घटनामा परेका प्रत्येक यात्रुलाई विमान कम्पनीले अनिवार्य यो रकम दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान मोटर गाडीहरूमा ‘तेस्रो पक्ष बिमा’ जसरी कार्यान्वयन हुन्छ ।
बंङ्लादेशले सन् १९९९ मा मोन्ट्रियल अभिसन्धि हस्ताक्षर गरेको भए पनि संसदबाट पारित गरेको छैन । नेपालले अझ यस अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन ।
२०६७ सालमा नेपालले यस अभिसन्धि लागू गर्ने प्रक्रिया चलाएको भए पनि प्रक्रिया निक्कै ढिलो गरी अघि बढिरहेको छ । मोन्ट्रियल अभिसन्धि लागू गर्नका लागि राष्ट्रले अभिसन्धि हस्ताक्षर गरेर त्यससम्बन्धी छुट्टै कानुन पारित गर्नुपर्छ ।
यो अभिसन्धि लागू भएपछि विमानको भाडा भने बढ्नेछ । नेपालजस्तो मूल्य संवेदनशील बजारमा यसले यात्रु सङ्ख्या घटाउने डरले विमान कम्पनीहरूले पनि यसमा चासो दिइरहेका छैनन् ।
नेपाल हाल विमान दुर्घटनासम्बन्धी ‘बार्सा अभिसन्धी’मा मात्र अनुबन्ध रहेको छ । यो अभिसन्धि अनुरूप विमान दुर्घटनाका मृतक वा घाइते यात्रुले प्रतियात्रु २०,००० अमेरिकी डलर (लगभग ने.रु. २० लाख बराबर) क्षतिपूर्ति पाउनेछन् ।
सोमाबार त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा बङ्लादेशी यू.एस.–बङ्ला वायुसेवाको बम्बार्डिएर डस ८ विमान दुर्घटना हुँदा ४९ यात्रुको मृत्यु भएको थियो । मर्नेमा २२ नेपाली, २६ बङ्लादेशी र एक चिनियाँ नागरिक रहेका छन् ।
दिदी र भाई बिच घट्न पुगेको एक अप्रिय घटनाको दर्दनाक घटना पढ्नुहोस…
यी हुन देशको मुहार फेर्न आएका ओली सरकारका १० नयाँ अनुहार
सपनामा देखिएको भैरवको मूर्ति विपनामै यसरी भेटियो कमेन्टमा ओम लेखनुहोस तपाईको दिन शुभ हुनेछ
भगवानका पाला देखिनै यौन सम्पर्क गर्ने सयौ तरिका भए पनि महिलाहरूलाई मन पर्ने सेक्स पोजिसन यस्ता छन्
१० कक्षा पढ्न बुवासँग एक सय रुपैँया माग्ने नवराज थापा बने यूएईमा ग्यारेजका मालिक
यौन जिज्ञाशा: महिलालाई असाध्यै मनपर्ने यौन आसन कुन कुन हुन् ?
सुन्दरतामा हिरोइनलाई पनि टक्कर दिने यि हुन् बलिउडका सुन्दरी गायिकाहरु, जो नाच्न छाडेर लाखौँमा आवाज बेच्छन् र आँफुलाई कर्के नजर लगाउनेलाई गीतबाट नै घायल बनाइदिन्छन्
श्रीमान बिदेश भएकी महिलालाई बलात्कार गर्न खोज्नेलाई जुत्ताको माला र २… (128)
सैफअलि खान की छोरीले नेपाली बोल्दै नेपाली दर्शकलाई यस्तो भनेपछि… (81)
यौन जिज्ञाशा: महिलालाई असाध्यै मनपर्ने यौन आसन कुन कुन हुन् ? (44)
भगवानका पाला देखिनै यौन सम्पर्क गर्ने सयौ तरिका भए पनि महिलाहरूलाई मन… (30)
सिंगापुरमा पानीमा आगो लगाइन् संजय दत्तकी पत्नी मान्यताले, हेर्नुहोस् ६… (23)